Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu yeelan doonaa xarig la mid ah kuwa hadda jira. Wararka IPhone
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu lahaan doonaa xargo la mid ah kuwa hadda jira
Waxay umuuqataa inaan heli doono Apple Watch cusub oo ay weheliyaan iphone-yada cusub. Jiilka afraad ee Apple's smartwatch ayaa sidaas darteed imaan doona dhamaadka sanadka iyo inkasta oo ay jiraan warar xan ah oo aan aragnay bilihii hore waxay u muuqataa in isbeddelka qaabku uu sugi doono.
Saacad leh naqshad qaab ahaan isku mid ah tan hadda jirta laakiin leh shaashad ballaaran oo sidaas darteed la jaan qaadi kara xargaha hadda jira, taasi waxay noqon doontaa waxa aan ku aragno munaasabadda soo bandhigidda bisha Sebtember ee soo socota. Mark Gurman oo ka tirsan Bloomberg ayaa na siiyay faahfaahinta (wax yar) ee Apple Watch cusub.
Ma jiri doono wareeg Apple Apple ah marka laga reebo wax lala yaabo oo caasimada ah. Apple waxay ku adkeysaneysaa fikradeeda ah in shaashadda wareegga ahi aysan ahayn tan ugu habboon aaladda noocan ah sidaa darteedna waxaan lahaan doonnaa isla naqshadda Apple Watch ee aan hadda arki karno. Dabcan, shaashadda xoogaa wey weynaan doontaa iyada oo loo mahadcelinayo qaar ka mid ah looxyada khafiifka ah, sida ku cad dillaacyada, 0% ka weyn cabbirka. Faahfaahin lagama bixinayo haddii tikniyoolajiyadda soo-bandhiggu ay wax iska beddelayso ama ahaanayso OLED sidii hore.
Adiga oo ilaalinaya isla qaabka iyo cabirka, xargaha ayaa sii wadi doona inay u adeegaan jiilkan cusub, taasoo u sahlaysa kuwa dhistay ururintooda xargaha, kuwaas oo arki doona inay awoodi doonaan inay ku sii wataan adeegsiga saacada cusub. Gurman wuxuu kaloo sheegay in saacadda cusub ay yeelan doonto a nolosha batteriga oo dheer iyo astaamo cusub oo caafimaad iyo jimicsi ku habboon, si macquul ah u aragta isbeddelka Apple ee jiilalka ugu dambeeyay iyo cusbooneysiinta watchOS 5. Dhammaan moodooyinka ma yeelan doonaan isku xirnaanta LTE / 4G? Weli waa la arki doonaa laakiin xogaha ugu dambeeya ee hubiya inay jiri doonaan tusaalooyin yar oo la heli karo ayaa sidan u socon kara, sidaa darteed meesha lagama saarayo in Apple Watch ugu dambeyn 100% ka madax bannaan yahay iPhone.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu lahaan doonaa xargo la mid ah kuwa hadda jira
Apple wuxuu sii daayaa iOS 12 Beta 11 ee iPhone iyo iPad
IPhone-yada cusub waxay yeelan doonaan horumarin dhanka kamarada ah mana lahan "Plus" magaca